စာနာထောကျထားမှု Sympathy ကို အငျ်ဂလိပျလို ဘယျလိုဖောျပွမလဲ - Wall...
Home | ဘလော့ခ် | စာနာထောကျထားမှု Sympathy ကို အငျ်ဂလိပျလို ဘယျလိုဖောျပွမလဲ
စာနာထောကျထားမှု Sympathy ကို အငျ်ဂလိပျလို ဘယျလိုဖောျပွမလဲ
နေ့စဉျဘဝထဲမှာတော့ ညံ့ဖငြျးတဲ့အငျ်ဂလိပျစကားကွောငျ့ ရှုပျထှေးမှုတှဖွေစျနိုငျတဲ့ အခွအေနတှေေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ နားလညျမှုလှဲတာတှေ (သို့မဟုတျ) စိတျပကြျသှားစနေိုငျတဲ့ အခွအေနမြေိုးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ စာနာ ထောကျထားကွောငျး၊ ဝမျးနညျးကွောငျးဖောျပွတာဟာ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးဖွစျပါတယျ။ လူတှကေ သငျ့ကို သူတို့ရဲ ့ဝမျးနညျးဖှယျရာသတငျးတှအေကွောငျးပွောတဲ့အခါ၊ ရိုးသားစှာနဲ ့သငျ့တောျစှာ ပွောဆိုတုံ့့ပွနျတတျဖို့၊ အသိဉာဏျရှိထားဖို့ လိုပါတယျ။ အငျ်ဂလိပျလို စာနာကွောငျးဖောျပွတာဟာ အောကျပါအခွအေနမြေိုးတှမှော ဖောျပွပါတယျ။
မရငျးနှီးတဲ့ သူတှနေဲ့ပွောတဲ့အခါ (အခနျ့သုံးစကား)
သငျ့ဟာ စီးပှားရေးလုပျဖောျကိုငျဖကျတစျဦးနဲ ့ပွောဆိုနစေဉျ သို ့မဟုတျ ကိုယျကောငျးကောငျး မသိတဲ့လူတှနေဲ ့ပွောဆိုနရေရငျ စာနာထောကျထားကွောငျးကို ယဉျကြေးမှုရှိစှာ၊ ခြိုသာစှာနဲ ့ပွောဆိုရပါမယျ။ ဒီလို ရေးနိုငျ ပွောနိုငျပါတယျ။
- Please accept my condolences! (ကြှနျတော့ျရဲ ့စာနာထောကျထားမှုကို ကြေးဇူးပွု၍လကျခံပါ။)
- I’m sorry to hear about that. (သတငျးကွားရတာ စိတျမကောငျးစရာပဲဗြာ။)
- You have my sincere sympathy. (ရိုးသားစှာဖွငျ့ စာနာမိပါကွောငျး။)
- Words fall short of expressing my sadness for your loss. (mainly in writing) (ခငျဗြားရဲ ့ဆုုံးရှုံးမှုအတှကျ ကြှနျတော့ျဝမျးနညျးမှုကိုဖေါျပွဖို ့စကားလုံးမရှိပါ။ (အထူးသဖွငျ့ စာအရေးအသားမှာ သုံးပါတယျ။))
- With deepest sympathy on your loss of…. (သငျ့ဆုံးရှုံးမှုအတှကျ အနကျရှိုငျးဆုံး စာနာလကြျ)
- My heart is with you in this time of sorrow / bad luck. (ကံမကောငျးသော/ဝမျးနညျးဖှယျ ယခုအခြိနျတှငျ ကြှနျတော့ျစိတျနှလုံးလညျး ခငျဗြားနဲ ့အတူရှိနပေါတယျ။)
- I am so sorry that it happened. (ဖွစျပကြျခဲ့ရတာအတှကျ အလှနျစိတျမကောငျးဖွစျရပါတယျ။)
ရငျးနှီးတဲ့ သူတှနေဲ့ပွောတဲ့အခါ (အရပျသုံးစကား)
သငျ့မိသားစုဝငျတှေ သို ့မဟုတျ မိတျဆှရေဲ ့့့ဖွစျစဉျတှနေဲ ့ကွုံရတဲ့အခါမြိုးတှမှောဆိုရငျတော့ သငျ့ခံစားမှုနဲ ့စိတျသောကကို မူတညျလို ့ပုံမှနျသဘောထကျပိုပွီး ရိုးသားစှာ ဖှငျ့ဟပွောဆိုနိုငျပါတယျ။ အောကျပါစကားစုတှကေို သငျ့အနနေဲ ့ရှေးခယြျသုံးစှဲနိုငျပါတယျ။
- That’s terrible, I’m sorry. (ဒါတောျတောျဆိုးတာပဲ၊ ဝမျးနညျးမိပါတယျ။)
- I heard what happened. I’m so sorry! (ဘာဖွစျခဲ့လဲဆိုတာကို ကွားမိတယျ။ ဝမျးနညျးမိပါတယျ။)
- Oh no, bad luck! (အိုး ကံဆိုးရှာလိုကျတာဟယျ။)
- I’m here for you if you need anything. (ခငျဗြားလိုအပျတာရှိရငျ ကြှနျတောျအဆငျသငျ့ရှိနမေယျနောျ။)
- That’s so sad that … (... ကွောငျ့ သိပျစိတျမကောငျးစရာပဲ။)
- Whatapity! You will do better next time! (သနားစရာဘယျလောကျကောငျးလိုကျပါလိမျ့၊ နောကျတစျကွိမျဆို ခငျဗြား ပိုကောငျးအောငျလုပျနိုငျမှာပါ။)
- I hope you feel better soon. (မကွာခငျ ခငျဗြားနထေိုငျရသကျသာသှားမယျလို ့မြှောျလငျ့ပါတယျ။)
နှစျသိမျ့မှုကို ဖောျပွရနျ သုံးသောစကားမြား
တစျစုံတစျယောကျ ကှယျလှနျသှားတာကို သငျကွားတဲ့အခါ စာနာထောကျထားမှုဟာ အမြားကွီးလိုအပျပါတယျ။ အထကျမှာ ဖောျပွခဲ့တဲ့စကားစုတှအေပွငျ သငျဟာ အောကျပါစကားစုတှကေိုလညျး သုံးနိုငျပါသေးတယျ။
- I heard about your tragic loss. My deepest sympathy. (ခငျဗြားရဲ ့ဆုံးရှုံးမှုကို ကွားမိပါတယျ။ အနကျရှိုငျးဆုံးစာနာမိပါတယျ။)
- I am heartbroken by this sad news. He / she will always be in our heart. (ဒီဝမျးနညျးဖှယျသတငျးကွောငျ့ ကွကှေဲရပါတယျ။ သူ/သူမဟာ ကြှနျတောျတို ့နှလုံးသားထဲ အမွဲရှိနမှောပါ။)
- I am sorry that I could not convey my condolences in person. (in case you live far away) (လူကိုယျတိုငျလာရောကျပွီး ဝမျးနညျးကွောငျးမဖောျပွနိုငျသညျ့အတှကျ စိတျမကောငျးဖွစျရပါတယျ။(ဒါကတော့ ကှယျလှနျသူတစျဦးရဲ ့သတငျးကွားခြိနျသငျက အဝေးကိုရောကျနတေဲ့အခါမြိုးမှာ သုံးတာပါ။))
- Wishing you peace as you grieve this loss. (ဒီဆုံးရှုံးမှုအတှကျ ခငျဗြားပူဆှေးရသလို ငွိမျးခမြျးမှုလညျးရပါစလေို့ ဆန်ဒပွုပါတယျ။)
- Please accept my condolences. Your father wasagreat man. (ကြှနျတော့ျရဲ ့ဝမျးနညျးကွောငျးဖောျပွခကြျကို လကျခံပေးပါ။ ခငျဗြားရဲ့ ဖခငျဟာ အကောငျးဆုံးလူတစျဦးပါပဲ။)
- Our heartfelt condolences to you upon the passing of… (ကြှနျတောျတို့ စိတျထဲကဝမျးနညျးမှုတှဟော …ကှယျလှနျခွငျးအတှကျ ခငျဗြားနဲ့ ထပျတူရှိနပေါတယျ။)
- May our memories of…..help to sustain you at this most difficult time. (ကြှနျတောျတို့ရဲ ့……..ကို အမှတျရမှုတှကေ ဒီလိုမြိုး အခကျအခဲဆုံးအခြိနျမှာ ခငျဗြားကို ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျအောငျ ကူညီနိုငျပါစေ။)
သငျ့အနနေဲ ့ဘယျတော့မှ မပွောသငျ့တဲ့စကားမြား
သငျ့အနနေဲ ့ဝမျးနညျးကွောငျး၊ စာနာထောကျထားကွောငျးပွောတဲ့အခါတှမှော ကနြျရစျသူတှရေဲ ့ဆုံးရှုံးမှုကို ငွငျးပယျတဲ့သဘော (သို့မဟုတျ) အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အပိုငျးခညြျးပွောမိတာမြိုးတှလေုပျရငျ ကိုယျ့စတေနာကို အထငျလှဲခံရနိုငျပါတယျ။ ဘယျအခွအေနမြေိုးမှာမဆို သငျ လုံးဝမသုံးရမယျ့စကားတှကေတော့….
- I know how you are feeling. (ခငျဗြားဘယျလို ခံစားနရေလဲ သိပါတယျ။)
- Now you can finally move on with your life. (နောကျဆုံးတော့ ခငျဗြားကိုယျ့ဘဝကိုယျ စတငျနိုငျပွီပေါ့။)
- He / she is inabetter place. (သူ/သူမဟာ ကောငျးရာမှနျရာ ရောကျသှားမှာပါ။)
- How are you holding up? (ခငျဗြား ဘယျလိုတောငျ့ခံထားပါသလဲ။)
- I don’t know what I would do if my….passed away. (ကြှနျတော့ျရဲ ့….ကှယျလှနျသှားခဲ့ရငျလညျး ကြှနျတောျဘယျလိုလုပျရမလဲ မသိပါဘူးဗြာ။)
- Don’t worry. Things are going to be alright. (မစိုးရိမျပါနဲ့။ အခွအေနတှေဟော ပွနျကောငျးလာတော့မှာပါ။)
- At least everything was quick and you hadachance to say goodbye. (အနညျးဆုံးတော့ အရာအားလုံးဟာ လငြျမွနျစှာဖွစျပကြျနတော၊ ခငျဗြားဘကျက နှုတျဆကျခှငျ့တော့ရခဲ့တာပဲ။)